Etazonia - Howling Pixel
Ny Etazonia dia firenena any Amerika Avaratra izay mizara ho faritra mizakatena (state) dimampolo, distrika federaly iray ary, faritra ivelany (territory) 14. Ny firenena Kanada no manamorona azy ao avaratra, Meksika kosa avy atsy atsimo. Ny ranomasina Atlantika sy Pasifika no sisin-taniny atsinanana sy andrefana. Ny faritra iray izay atao hoe Alaska dia any avaratr'i Kanada no misy azy ary ny andian'nosy Hawaii dia any amin'ny ranomasina Pasifika.
9,7 tapitrisa kilaometatra toradroa ny fivelarantany misy azy, ary faha-efatra eran-tany izy amin'ny fivelaran-tany sy ny isan'ny mponina monina ao aminy. Izy no firenena manana toe-karena matanjaka indrindra eran-tany.
United States of America ((en))
Etazonian'i Amerika ((mg))
Teny filamatra :
(1776 - ankehitriny) E Pluribus Unum
(latina : «Tokana avy amin'ny maro»)
(1956 - ankehitriny) In God We Trust
(Anglisy : «Andriamanitra no itokiantsika»)
Teny ofisialy Faritra federaly Anglisy Amerikanina avy hatrany
Teny ofisialy ny teny anglisy anaty ny staty 30
20 % ny mponina miteny teny afa, ny teny espaniola tena be indrindra
Renivohitra Washington, DC
38° 53' N, 77° 02' O
Tanàna lehibe indrindra New York
- Filoham-pirenena Repoblika federaly
- Rano (%) faha 4
9 629 048 km²
- Tontaliny (2007)
- hakitroka faha 3
302 074 000 mpo.
Anaran'ny mponina Amerikana
IDH (2005) Mihakatra 0,948 (ambony) faha-12
Sandam-bola Dollar Amerikana (USD)
Faritr'ora UTC -5 -10
Hiram-pirenena The Star-Spangled Banner
Ny Etazonia dia manam-pivelarana 9,6 tapitrisa km2 ary milahatra faha efatra amin'ny firenena ngeza indrindra eto an-tany. Betsaka ny potentialité sy ny harena an-kibon'ny tany misy any, izay kosa dia manazava ny hery ara-toe-karenan'i etazonia. Tamin'ny fahaleovantenany tamin'ny taonjato faha 17, repoblika federaly mikaonty faritra mizakantena dimampolo manam-pahefana ny etazonia. Ny renivohiny dia Washington D.C, fa New York ny tanàna ngeza indrindra sy manan-karena indrindra. Nihoatra 300 tapitrisa ny isan'ny olona tamin'ny taona 2008, noho izany, anisan'ny firenena be olona indrindra ny Etazonia eo aorian'i Sina sy ny vondrona Indianina. Ny Etazonia dia firenena manan-karena indrindra eto an-tany.
Ny tondro ara-jeografiany amin'ny ankapobeny
Ny tanàna ngeza indrindra
Hakitroky ny mponina
Ny Etazonia dia firenena fahaefatra ngeza indrindra eto an-tany (9 631 417 km2) eo aorian'ny Rosia, ny Kanada ary ny Sina. Ny hangezan'ny tany amerikana dia saika hangezan'ny kontinenta eoropeana na in-15-n'i Madagasikara. Any Amerika Avaratra no misy ny Mainland na ny Renitany, ao amin'io Mainland io ny 48 amin'ny 51 faritany mizaka-tenan' Etazonia. Ny endriky ny Mainland moa dia dimilafy ivelaran'ny fiozaon'ora dimy. 4 500 kilometatra ny halaviran'ny amorontsiraka Atlantika sy ny Amorontsiraka Pasifika, ary 2 500 kilometatra ny halava ny dia tokony atao raha miainga ao Meksika ka raha te-ho any Kanada. Ny tontalin'ny sisin-tany zarain' Etazonia amin'ny firenena hafa dia misy 12 034 km ; 8 893 km miaraka amin'i Kanada, (2 477 km miaraka amin' Alaska), 3 141 km miaraka amin'i Meksika ary 28 km miaraka amin'i Kioba (any Guantanamo). Ny halava tontalin'ny amorontsiraka dia 19 924 km.
Ny Etazonia dia olona avy amin'ny foko maro samy hafa sy ny foko samihafa. 80% ny olona ao amin'ny Etazonia States taranaky ny mpifindra monina avy any Eoropa. Olona avy any Alemaina, Angletera, Ekosy, Irlandy, Afrika, ary Italia. 13% ny olona any Etazonia dia Afrikana-Amerikana. Ny ankamaroan'izy ireo hidina avy any amin'ny andevo Afrikana izay nentina tao Amerika. Amerikana Aziatika dia 5% -n'ny mponina any Amerika, fa ho lehibe kokoa ny anjara ao amoron-tsiraka andrefana. Ohatra ao California, Azia-Amerikana ho ny 13% -n'ny mponina ny fanjakana izany. Ny hispanika-Amerikana, na ny olona ny teny niaviany ho ny 15% amin'ny firenena. Ny Teratanin'i Amerika sy ny Inuit (Eskimos) dia vondrona kely dia kely.
11% ny olona any Etazonia dia teraka tany ivelany. 18% no miteny fiteny hafa ankoatra ny teny anglisy ao an-trano. Ho an'ny olona 25 taona no ho miakatra, 80% no nahazo diplaoma sekoly ambony raha 25% dia manana ny mari-pahaizana lisansa, na kely na ambony kokoa.
Ny fanisam-bahoaka ny taona 2000 dia ahitana tatitra mikasika ny razamben'ny mponina. Avy amin'izany dia 43 tapitrisa alemà-Amerikana, 30,5 tapitrisa irlandey-Amerikana, 24,9 tapitrisa Afrika-Amerikana, 24,5 tapitrisa Anglisy-Amerikanina, sy 18.4 tapitrisa Meksikana-Amerikana.
Ny Etazonia dia ahitana faritany miazaka tena 50, 5 faritany 5 sy distrika 1 (Washington DC). Hoy ny lalàna momba ny afaka manao zavatra ao amin'ny fanjakana, fa ny lalàna federaly matetika momba ny zavatra mifandray amin'ny fanjakana mihoatra ny iray, na mifandray amin'ny firenen-kafa. Any amin'ny faritra sasany, raha ny governemanta federaly no manao lalàna izay milaza zavatra hafa avy amin'ny fanjakana ny lalàna, ny olona dia tsy maintsy manaraka ny lalàna federaly, satria tsy manan-kery intsony ny lalàn'ny faritany. Faritany samy manana ny lalam-panorenana ny tenany, hafa noho ny lalam-panornana federaly (nasionaly).
Ny federaly sy ny fanjakana indrindra ny fitondram-panjakana dia anjakan'ny antoko politika roa: ny repoblikanina ary ny demokraty. Misy ihany koa ny antoko kely kokoa maro be; ny lehibe indrindra amin'ireo dia ny Libertarian Party sy ny Antoko Maitso. Ny olona dia afaka manome vola izay tiany ho an'ny fampielezan-kevitra ara-politika , ary miezaka ny mandresy lahatra ny mpanao politika mba hanampy azy ireo. Izany no antsoina hoe lobbying.
Nanomboka tamin'ny 2009, ny filoha dia Demokraty, ka demokraty manana fahefana kely kokoa ao amin'ny governemanta federaly. Na izany aza, dia mbola maro repoblikanina mahery izay afaka hisakana ny demokraty tsy hanao zavatra izay inoany ho ratsy ho an'ny firenena.
Fanomboan'ny Tantarany (1776-1917)
Saika mpiavy ny olona rehetra ao aminy, na ny tera-tany aza. Ny zanatany Anglisy 13 izay niforona teo amin'ny sisn-dranomasina Atlantika ary nanambara ny fahaleovan-tenany tamin'ny 4 Jolay 1776 no lasa Etazonia amin'izao fotoana izao. Nanomboka teo dia nihitatra nankany andrefana ny sisin-tany ka resy tosika ireo foko isan-karazany izay nonina tao talohan'ny eoropeana. Toa izao ny fivoaran'ny fahazoany ny tany:
1798 dia teo am-pelatanan'ny Amerikana ny faritra atsinanan'ny renirano Mississippi manontolo.
1803 dia novidiny avy tamin'ny Frantsay ny faritra lemaka andrefan'ny Mississippi.
1818 notapahina niaraka tamin'ny Anglisy ny tokony ho sisin-tany avaratra
1819 nanome tany vitsy any Louisiana sy Colorado Espana izay resy an'ady
1845 nahaleo tena tamin'ny Meksika ny Texas ka nivondrona tamin'ny Etazonia
1846 nomen'ny Anglisy ny faritra Oregon
1848 nomen'ny Meksika izay resy an'ady ny faritraha misy ny Kalifornia ankehitriny
1853 novidina tamin'ny Meksika ny faritra atsimon'i Arizona
1857 novidina tamin'ny Rosia ny Alaska
1898 nozanahina ny nosy Hawaii
1898 nomen'ny Espana izay resy an'ady ny nosy Porto-Rico
1917 novidina tamin'ny Danimarka ny nosy Virgin Islands sy ireo nosy madinika manodidona azy.
Lasa Firenena Matanjaka (1914-1945)
Taorian'ny Ady Lehibe Voalohany 1914-1918 vao azo lazaina hoe firenena anisan'ny matanjaka eran'izao tontolo izao ny Etazonia. Niharan'ny fahantrana mafy anefa izy taorian'ny taona 1929. Tsy nitsahatra izany raha tsy tapitra ny Ady Lehibe Faharoa (1945). Ka nanomboka ny Ady Mangatsiaka niaraka tamin'ny Fanjakana Sovietika.
Ny Ady Mangatsiaka (1945-1991)
dia tsy nahitana fifandonana ara-tafika fa donan-kevitra no nisy
Firenena Matanjaka tsy Manampaharoa (1991- ankehitriny)
Rehefa nirava ny Fanjakana Sovietika 1991 dia lasa ny Etazonia irery no firenena matanjaka eran'izao tontolo izao. Hita izany amin'ny alalan'ny herisetra izay azony atao ka tsy mila miera amin'ny Firenena Mikambana izy. Ankehitriny dia ny mandamintany any Iraka sy Afganistana ary ny fiadiana amin'ny mpampihorohoro silamo no zavadehibe aminy.
Jereo Koa / Lahatsoratra ilaina
Teratany Ny Amerika
Ny ady ho an'ny fahaleovantena
Ny firenena 50 ny Etazonia
Jereo koa/Lahatsoratra ilaina
AL Alabama - Montgomery
AK Alaska - Juneau
AZ Arizona - Phoenix
AR Arkansas - Little Rock
CA California - Sacramento
CO Colorado - Denver
CT Connecticut - Hartford
DE Delaware - Dover
FL Florida - Tallahassee
GA Georgia - Atlanta
HI Hawaii - Honolulu
ID Idaho - Boise
IL Illinois - Springfield
IN Indiana - Indianapolis
IA Iowa - Des Moines
KS Kansas - Topeka
KY Kentucky - Frankfort
LA Louisiana - Baton Rouge
ME Maine - Augusta
MD Maryland - Annapolis
MA Massachusetts - Boston
MI Michigan - Lansing
MN Minnesota - Saint Paul
MS Mississippi - Jackson
MO Missouri - Jefferson City
MT Montana - Helena
NC North Carolina - Raleigh
ND North Dakota - Bismarck
NE Nebraska - Lincoln
NV Nevada - Carson City
NH New Hampshire - Concord
NJ New Jersey - Trenton
NM New Mexico - Santa Fe
NY New York - Albany
OH Ohio - Columbus
OK Oklahoma - Oklahoma City
OR Oregon - Salem
PA Pennsylvania - Harrisburg
RI Rhode Island - Providence
SC South Carolina - Columbia
SD South Dakota - Pierre
TN Tennessee - Nashville
TX Texas - Austin
UT Utah - Salt Lake City
VT Vermont - Montpelier
VA Virginia - Richmond
WA Washington - Olympia
WV West Virginia - Charleston
WI Wisconsin - Madison
WY Wyoming - Cheyenne
Ny Chicago dia ny Illinois, any Etazonia Tamin'ny fanisana tamin'ny taona 2010, nisy olona 2 695 598 mahery tany,
43.2066666667°N 71.5380555556°W﻿ / 43.2066666667; -71.5380555556
Concord, New Hampshire dia tanàna ao amin'ny faritany mizaka tenan'i New Hampshire, ao Etazonia. .
Ny Delaware dia firenena any Etazonia, ny renivohiny dia Dover.
Misy mponina 864.764 any.
Denver (amin'ny fiteny anglisy Denver [ˈdɛnvɚ]) dia renivohitr'i Colorado, etazonia. Izy no tanàna ngeza indrindra any Colorado, ny tanànan-dehiben'i Denver dia miisa 2,9 tapitrisa.
Any ampivoany-andrefan'i Etazonia Denver, amin'ny lohasaha ny South Platte, any andrefan'ny Tany Lemaka, 30 kilometatra any antsinanan'i Front Range ilay tanàna. Ny solonanaran'i Denver koa dia Mile-High City satria 1 mily ( 1609 m ) ny haabo an'ilay tanàna.
Ny Dover dia renivohitra ny Delaware, any Etazonia Tamin'ny fanisana tamin'ny taona 2010, nisy olona 48.950 mahery tany, Dover no tanàna lehibe indrindra any Delaware, aorian'i ny Wilmington, Middletown, Milford, New Castle, sy Seaford.
Ny Hartford dia renivohitra ny Connecticut, any Etazonia Tamin'ny fanisana tamin'ny taona 2010, nisy olona 124 775 mahery tany, Hartford no tanàna lehibe indrindra any Connecticut, aorian'i ny Bridgeport, New Haven, Norwalk, Stamford, sy Waterbury.
Ny Honolulu dia renivohitra ny Hawaii, any Etazonia Tamin'ny fanisana tamin'ny taona 2010, nisy olona 374 658 mahery tany, Honolulu no tanàna lehibe indrindra any Hawaii, aorian'i ny Pearl City, Hilo, Kailua, Waipahu, sy Kaneohe.
Ny Indianapolis dia renivohitra ny Indiana, any Etazonia Tamin'ny fanisana tamin'ny taona 2010, nisy olona 839 489 mahery tany, Indianapolis no tanàna lehibe indrindra any Indiana, aorian'i ny Fort Wayne, Gary , Evansville, Hammond, Bloomington sy South Bend.
Ny Jackson dia renivohitra ny Mississippi, any Etazonia Tamin'ny fanisana tamin'ny taona 2010, nisy olona 173 514 mahery tany, Jackson no tanàna lehibe indrindra any Mississippi, aorian'i ny Gulfport, Hattiesburg, Southaven, Biloxi, Meridian, sy Tupelo.
Ny Jefferson City dia renivohitra ny Missouri, any Etazonia Tamin'ny fanisana tamin'ny taona 2010, nisy olona 173 514 mahery tany, Jefferson City no tanàna lehibe indrindra any Missouri, aorian'i ny Kansas City, St. Louis, Springfield, Independence, Columbia, sy St. Joseph.
Ny Madison dia renivohitra ny Wisconsin, any Etazonia Tamin'ny fanisana tamin'ny taona 2010, nisy olona 233 209 mahery tany, Madison no tanàna lehibe indrindra any Wisconsin, aorian'i ny Milwaukee, Green Bay, Kenosha, sy Racine.
Ny Oklahoma City dia renivohitra ny Oklahoma, any Etazonia Tamin'ny fanisana tamin'ny taona 2010, nisy olona 579 999 mahery tany, Oklahoma City no tanàna lehibe indrindra any Oklahoma, aorian'i ny Tulsa, Norman, Broken Arrow, sy Lawton.
Ny Philadelphia dia tanàna iray any Pennsylvania, any Etazonia. Tamin'ny fanisana tamin'ny taona 2010, nisàna olona 1 526 006 mahery tany.
Ny Providence dia renivohitra ny Rhode Island, any Etazonia Tamin'ny fanisana tamin'ny taona 2010, nisy olona 178 042 mahery tany, Providence no tanàna lehibe indrindra any Rhode Island, aorian'i ny Warwick, Cranston, Pawtucket, sy East Providence.
Ny Salt Lake City dia renivohitra ny Utah, any Etazonia Tamin'ny fanisana tamin'ny taona 2009, nisy olona 186 440 mahery tany, Salt Lake City no tanàna lehibe indrindra any Utah, aorian'i ny Houston, San Antonio, Dallas, Fort Worth sy El Paso.
Ny Santa Fe (Tewa: Ogha Po'oge, Navajo: Yootó) dia renivohitra ny New Mexico, any Etazonia Tamin'ny fanisana tamin'ny taona 2010, nisy olona 67 947 mahery tany, Santa Fe no tanàna lehibe indrindra any New Mexico, aorian'i ny Albuquerque, Las Cruces, Rio Rancho sy Roswell.
Ny Springfield dia renivohitra ny Illinois, any Etazonia Tamin'ny fanisana tamin'ny taona 2010, nisy olona 116 250 mahery tany, Springfield no tanàna lehibe indrindra any Illinois, aorian'i ny Chicago, Aurora, Rockford, Joliet, Naperville, Peoria sy Elgin.
Ny Trenton dia renivohitra ny New Jersey, any Etazonia Tamin'ny fanisana tamin'ny taona 2010, nisy olona 84 913 mahery tany, Trenton no tanàna lehibe indrindra any New Jersey, aorian'i ny Newark, Jersey City, Paterson sy Elizabeth.
Washington dia faritany mizaka tena any avaratra andrefan' Etazonia. Any avaratra izy voafaritry ny faritany kanadianin'ny Kolombia Britanika, voafaritry ny Idaho any atsinanana, ny Oregona any atsimo ary ny ranomasimbe Pasifika any andrefana. Aza afangaroana ny faritany mizaka-tenenan'i Washington sy ny Renivohitra ara-pederalin' Etazonia (Distrikan'i Columbia), any atsinanan' Etazonia, avy amin'ny anaran'ny filoha amerikana volaohany George Washington.